Kindle Paperwhite Signature Edition, အမှားဖြင့်ပေါက်ကြားသော ereader အသစ် eReaders အားလုံး
Kindle Paperwhite Signature Edition, မှားယွင်းစွာပေါက်ကြားသော ereader အသစ်
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle, စာဖတ်သူများ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ၏ရောက်ရှိမှုသည်အခြားအရာများအကြား၌နည်းပညာလောကသည်နှေးကွေးလာသည်။ ၎င်းသည် Amazon ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများသည်သူတို့၏ဖြန့်ချိမှုများကိုမျှော်မှန်းထားသည်ထက်နှစ်နှစ်အထိကြာစေသည်။ ငါတို့ရရှိခဲ့သော Kindle ၏စျေးနှုန်းများနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုလိုက်နာသောငါတို့အတော်ကြာသည် Kindle Paperwhite အပ်ဒိတ်နှစ်ပေါင်းများစွာမွမ်းမံခဲ့သော Amazon ၏ကြယ်စင်ဖတ်စက်
မကြာသေးမီက, Amazon ၏ Kindle Paperwhite သစ်ကိုမှားယွင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်လူတိုင်းကိုအံ့သြစေသောအချို့ကိရိယာများ။
ဒီမော်ဒယ်သစ်တွေအကြောင်းငါတို့ပထမဆုံးပြောရမယ့်အပြောင်းအလဲကတော့ ၆.၈ လက်မမျက်နှာပြင်ကိုသုံးထားသည်မရ။ နောက်ဆုံးတွင် Amazon သည်အလျှော့ပေး လိုက်၍ pixel သိပ်သည်းဆများရှိနေသော်လည်း၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်ပိုကြီးသော screen size သို့ရောက်ရှိသွားသည်။
အခြား Kindle မော်ဒယ်များနှင့်မတူဘဲ Kindle Paperwhite သစ်ကို ၆.၈ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် 6,8Gb သိုလှောင်မှုနှင့် "ပုံမှန်" ထုတ်ဝေမှုတို့ဖြင့်ရရှိလိမ့်မည်။ Signature Edition ဟုခေါ်သောဗားရှင်း ၎င်းသည်ပုံစံနှင့်အင်္ဂါရပ်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေလိမ့်မည် 32 Gb storage နှင့် ၆.၈ လက်မမျက်နှာပြင်.
မော်ဒယ်နှစ်ခုလုံးရပါလိမ့်မယ် IPX68 လက်မှတ် မင်းမှာလက်ရှိမော်ဒယ်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးနွေးထွေးတဲ့အလင်းအာရုံခံကိရိယာလည်းပါ ၀ င်လာမယ် backlight ၏ led မီးအရေအတွက်သူတို့မှာပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကိရိယာတွေရှိပြီးသားမို့။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီမော်ဒယ်များ သူတို့မှာအရောင် screen မရှိသလို epub ဖိုင်တွေကို execute လုပ်နိုင်ခြေလည်းမရှိဘူးမရ။ များစွာသောအသုံးပြုသူများမျှော်လင့်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့် Amazon သည် Kindle Paperwhite မော်ဒယ်များမပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းကိုအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များသို့ယူဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရသည်။
အသံနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုသည် Kindle Paperwhite Signature Edition အသစ်မှသယ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်
(ဖန်သားပြင်အရွယ်အစားအသစ်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမရှိဘဲ) ကျွန်ုပ်၏နှစ်သက်ဖွယ်အာရုံစိုက်မှုမှာပါဝင်မှုဖြစ်သည် အသံစာအုပ်များနားထောင်ရန် bluetooth moduleမရ။ နိမ့်ကျသောနိမ့်ဆုံးကိရိယာများဖြစ်သည့် Basic Kindle ပါ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသော်လည်းဤပုံစံတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောအကျိုးကျေးဇူးများမရှိပေ။ ဒါကအောင်မြင်မှုကြောင့်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး ကွားနိုငျအမေဇုန်ရဲ့အသံဖမ်းစာအုပ်ဝန်ဆောင်မှုကကျွန်တော့်ကိုဒီအရာထင်စေတယ် backlit display ကဲ့သို့အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်.
ငါတို့သိသလောက်တော့ Kindle Paperwhite နဲ့ Kindle Paperwhite Signature Edition နှစ်ခုလုံးမှာအရောင်မျက်နှာပြင်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် eReaders တွေမှာမမြင်ဖူးတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒါက ereaders တွေထက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းတာပိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ Kindle Paperwhite Signature Edition တွင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါ ၀ င်သည် ၎င်းသည်ကြာရှည်ဘက်ထရီမပါဟုမဆိုလိုပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ပုံမှန် Kindle Paperwhite သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်လို။ ဘက်ထရီကုန်သွားသောအခါထိုအချိန်များအတွက်ကောင်းသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဤလုပ်ဆောင်ချက်မပါ ၀ င်ပါ။
ဤသတင်းအရင်းအမြစ်သည်အမေဇုန်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည် သင်၏ကနေဒါဝက်ဘ်ဆိုက်သည် specs အသစ်ကိုမှားယွင်းစွာတင်ခဲ့သည် မော်ဒယ်သစ်များအပြင်စက်တစ်ခုစီ၏စျေးနှုန်း။
နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင်စျေးမတက်ဘဲ၊ Amazon သည် Kindle Paperwhite ၏စျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်၁၄၉ ဒေါ်လာဖြင့်ဤ eReader အတွက်စျေးနှုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။ Kindle Paperwhite Signature Edition ၏ကိစ္စ၌၎င်း၊ စက်၏စျေးနှုန်းသည်တစ်ယူနစ်လျှင် ၂၀၉ ဒေါ်လာအထိရှိသည်.
သင်မြင်သည့်အတိုင်းစျေးနှုန်းသည်သိသိသာသာမြင့်တက်လာသော်လည်းကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမြင့်တက်စေခြင်းမရှိဟုထင်ရသည်။ ပုံမှန်မော်ဒယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပေမယ့်လည်းစျေးအဟောင်းထက် ၁၀ ဒေါ်လာတိုးလာတယ်၊ ၆.၈ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်များထက်နိမ့်နေသေးသည်သုံးစွဲသူများစွာသည် Amazon device ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
Kindle Paperwhite သည်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်တစ်ခုတည်းသော Amazon မော်ဒယ်ဖြစ်လိမ့်မည်လား။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Kindle Paperwhite ၏ပုံစံသစ်များကိုသာသိသည်။ Kindle Oasis (သို့) Basic Kindle အကြောင်းငါတို့ဘာမှမသိဘူးအချိန်ကြာမြင့်စွာမွမ်းမံထားသောမော်ဒယ်များနှင့် Kindle Paperwhite ကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
အနာဂတ်အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိပါ Kindle အခြေခံ ၎င်းသည်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော် Kindle Oasis နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ Kindle Paperwhite Signature Edition သည် mid-range ထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းကိုသာမကစျေးနှုန်းကိုပါမြင့်တက်စေသည် Amazon ၏ high-end eReader ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်မြင့်တက်လာသည်မရ။ ထို့ကြောင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည်ပရီမီယံအကွာအဝေးတွင်မြင့်တက်လာလိမ့်မည် (သို့) အနည်းဆုံးကွဲပြားလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ လပေါင်းများစွာဖြန့်ချိပြီးနောက် Amazon ကဲ့သို့ကဏ္sectorများမှကုမ္ပဏီများသည်နည်းပညာအပေါ်တွင်နေရာမထားသေးသော်လည်းအရောင်မျက်နှာပြင်သည်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အသံနှင့်ရေခံနိုင်ရည်ပေါင်းစပ်မှုသည်လည်းမြင့်မားသောအကွာအဝေးတွင်ရှိနေလိမ့်မည်မှာသေချာပြီးကြိုးမဲ့အားသွင်းရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်မဆိုဖြစ်နိုင်သည် Amazon ကလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်အနည်းငယ်ကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အရင်တုန်းက Kindle Paperwhite ဒါမှမဟုတ် Kindle Voyage ကိုအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့ဖူးသလိုပဲ။
ကံမကောင်းစွာဘဲ Kindle Paperwhite သစ်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချိမယ့်အချိန်ကိုငါတို့မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သုံးစွဲသူတွေပိုများလာတာကဒီမော်ဒယ်တွေအတွက် accessories အသစ်တွေအကြောင်းပြောနေတာလို့ကြာလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။
Imagen - ကွမ်းခြံကုန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kindle Paperwhite Signature Edition, မှားယွင်းစွာပေါက်ကြားသော ereader အသစ်
PostmarketOS ကျေးဇူးကြောင့် Kobo Clara HD တက်ဘလက်ဖြစ်လာသည်